AADAN M CALI: Fuundigii la xag-jireeyay ee dilaaga halista ah noqday!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada AADAN M CALI: Fuundigii la xag-jireeyay ee dilaaga halista ah noqday!!
AADAN M CALI: Fuundigii la xag-jireeyay ee dilaaga halista ah noqday!!
(Hadalsame) 15 Agoosto 2019 – Waloow aysan lahayn awood baahsan sidda Al-Shabaab, haddana Daacishta Soomaaliya, waa khatar muuqata oo ka jirta qayb kamid ah Soomaaliya, taasi oo fulisa weeraro wejiyo kala duwan leh.
“Waxaan dilnay nin lagu magacaabo Bishaar oo noola sheegay in uu ka tirsanaa Al-Shabaab,” ayuu hadalkiisa ku daray. “Kadib markaan howsha fulinay, waxaa noola tuuray hal dollar, gurigeyga ayaan ku aaday”.
“Waxay u adeegsadaan duubista muuqaaladda moobeelada waaweyn ama kaamirooyinka yar-yar, waxaana qaabilsanaa Cismaan,” ayuu daba dhigay.
Previous articleDAAWO: ”Hadda Ilaah waa aaminsan ahay!” – Dayuurad siddey 233 qofood oo calool calool ugu dhacday beer galleey (Maxaa dhacay?)
Next articleJAANTAA ROGAN! Baarlamanka DF Somalia waa hay’adda qura ee aan lahayn anshax howleed & hab-raac muuqda!!